UMA UJESU KRISTU Tarde UYABUYA, AmaSonto NGAPHANSI KUKA ayanyamalala KWAMANZI! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Like me, wonke wayebona ukuthi ayobe Church akazange athathe indawo September 13 nokuthi uJesu Kristu hhayi emzimbeni wabuyela Earth 14 noma 15, noma ngisho ekupheleni ngenyanga ka September 2015.
Ngase babecabanga ezinye izihloko yami ukuthi lokhu ukubuyela ekhaya kungase kwenzeke ngaleso sikhathi futhi ngangenza iphutha!
Lokhu akukhona okokuqala. Kodwa njengoba kakade mina angiyena umprofethi!
Nokho, lokhu akusho ukuthi asilona ekupheleni kwesikhathi ngaphambi nje ukubuya kukaJesu Kristu.
Kunalokho, okwenzeka ngo-September ayenziwe izimpawu enamandla kakhulu.
Siye sabona inani elikhulu ukwenyuka kwesibalo sabantu impi waseSiriya ngokusebenzisa iqhaza yempi Russian kanye iqhaza yekwentiwa isikhathi ibutho Chinese.
Siphinde wathola ukuthi uPapa Francis wenza isitatimende block ngesikhathi uhambo lwakhe ukuze US ngesikhathi intshumayelo yakhe iSt Patrick Cathedral.
Translation of the Pope isitatimende:
« Isiphambano usibonisa enye indlela ukukala impumelelo. Sinikwe ukutshala imbewu. UNkulunkulu ubona izithelo zomsebenzi wethu.Futhi uma ngezinye izikhathi imizamo yethu nemisebenzi babonakala bahluleke izithelo, kumelwe sikhumbule ukuthi thina bakaJesu Kristu, nokuphila kwakhe, ekhuluma sekwenziwe, uye kushabalele, the ukwehluleka esiphambanweni. «
Wathi nesibindi ukuze amemezele ukuthi ukuphila futhi umhlatshelo kaJesu Kristu aye kushabalele esiphambanweni « yokwehluleka esiphambanweni. »
Upapa ungumholi ephakeme yeSonto LamaKatolika, isitatimende sakhe ngeke sithathwe kalula.
It is a ekuphikeni ingqikithi uJesu ungowaphezulu Kristu futhi okulingana isimemezelo olusemthethweni ukufa Ukholo the Vatican futhi ngaleyo ndlela basishaya kuqinisekisa sihloko yami: « UJESU KRISTU WABA nesisekeli noyingxenye iVatican Museum »
Inkulumo yakhe yokuvuma ukuthi ilahlekelwe ukholo futhi baphike uJesu Kristu.
« Kusobala ukuthi wethu oNgcwele Catholic Church is wafa ngokusemthethweni US at St Patrick Cathedral elikhulu ihlombe. «
Lesi sitatimende of Pope Francis kuwuphawu uqine kakhulu kweBhayibheli izikhathi kuphele « Ukuhlubuka » eyakhipha okuseduze ukubuya kukaJesu Kristu.
Ngamazwi akhe uPapa uye semthethweni Ukuhlubuka Vatican crucifying yethu oNgcwele Catholic Church.
Washiya isimungulu wonke amaKristu emhlabeni ukuze amazwi akhe phezu « ukuhluleka uJesu Kristu ‘bengelutho of a eyabusa uPetru ayinhlamba kuNkulunkulu, uJesu Kristu, ibandla futhi ukholo.
Kithina amaKristu, uPapa Francis ulandela emazwini akhe umalusi omuhle futhi omele njengabakufanelekelayo kaKristu Emhlabeni ngisho wenza iVatican ubuye ayisekho indawo ye Church of the Bheka Ongcwele Catholic.
Manje Holy See of the Catholic Church kuyinto kuze kubuye iNkosi yethu uJesu Kristu enhliziyweni zonke yobuKristu.
Sonke baba, bazalwane bami abathandekayo nodadewethu, abalindi ukholo futhi izwi likaJesu Kristu.
Kodwa Pope uhlala ngokomthetho Pope futhi kumelwe balihloniphe.
Kuyinto kuJesu Kristu, esebuya yakhe, ukuthi Pope Francis uyolandisa;nje uthanda sonke leso daba. Ungakhohlwa ukuthi sonke siyizoni!
UJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu wasamukela uthando ngathi ukuba babe namahloni, bathukwa, bahlukunyezwe, ebhaxabulwa futhi ekugcineni esiphambanweni ukuze asihlenge ezonweni zethu.
Kuyinto ngomhlatshelo, igazi futhi uthando ngoJesu Kristu ukuthi amasango ezulu avulekele kithi.
The kokubethelwa kukaJesu Kristu akuwona umphumela ukwehluleka kodwa umhlatshelo esisemqoka ngalo uzenzé indodana kaNkulunkulu, ukwenza uthando lwakhe izono zabo bonke abeza kuye futhi kanjalo bathethelele us phambi kukaNkulunkulu uBaba.
Njengoba nje uNkulunkulu wamvusa uJesu ekuphileni emva kwezinsuku ezintathu esethuneni, uNkulunkulu uthando, umhlatshelo negazi likaJesu Kristu uyonikeza ukuthethelela kwakhe futhi ngeke ukugwedla ekuphileni ekwahlulelweni last bonke labo kuyofika UJesu Kristu.
Ngakho sikwazi ukujabulela ukuphila okuphakade ePharadesi ngoba sizobe nisindisiwe futhi ngeke kube phakade loJesu Kristu.
UJesu Kristu kuwukuphela kwendlela ukungena embusweni wezulu!
Kufanele sithandaze kaninginingi insindiso yethu futhi uthole usizo nsuku zonke uNkulunkulu kubalulekile kithi kulezi zikhathi ezinzima sekwephuzile lokho.
Kudingeka sithandazele insindiso Pope Francis, sonke isintu, abafowethu nodadewethu futhi ukubuya okusheshayo weNkosi yethu uJesu Kristu
Kufanele siqaphele ukuthi Church wethu owayesevele futhi ngeshwa uyaqhubeka bayoshushiswa emhlabeni, manje ngokusemthethweni ufile.
Ngakho thina Nodadewabo wami othandekayo yonke odabukile kanye kuphela elinde iNkosi yethu neNkosi uJesu Kristu.
Iqiniso lokuthi uPapa ngokuchachileyo waphika uJesu Kristu eqinisweni Zishiya ibandla yayo ethembekile bubonisa ngokunamandla ukuthi Ukuhlubuka ngempela manje okuphelele futhi jikelele.
Lokho uyokwenza sekwenzekani manje?
Yebo ngingamnika kuphela izakhi zokuphendula e yezinsiza ezizathwini.
Lezi ezizathwini hhayi iziprofetho futhi …!
Kubonakala Pope Francis ukuba abe umholi wezwe yale nhlangano zonke izinkolo. Ngokuqinisekile maduze ukwakha O rganization of R eligions okungase kubizwe ngokuthi i « OR » Angase in the image of the United Nations « UN. »
Akubuzwa ukuthi amaKristu abahlanganyela noma ukusekela okunjalo inhlangano yenkolo neyobuntu kuyoba kude kulandela imfundiso kaJesu Kristu.
Nothing sekushintshile, bayohlala ngeshwa isigqi inhlekelele uqhubeke bese andisa ngokuphindaphindiwe kuze kubuye uJesu Kristu.
In the Impi ye-Armagedoni
I ahlale bayaqiniseka ukuthi kuba Syria, futhi uzoqhubeka ngokuhlaselwa kuka-Israyeli ukuthi uqala ukuphila ekuqaleni yombango nazo zonke lezi ukuhlaselwa amaJuda ngokuzumayo imimese.
Ngokuba World Economy:
Nakuba Russia and China wamisa uhlelo esizimele izinkokhelo futhi ukuhweba, kuyoba ubuwula ukukholelwa ukuthi US uyosamukela kokuwa ongenakugwenywa dollar kodwa.
The US kusengaphambili ukuba asenze isinyathelo kunalokho giant towards izwe ngaphandle cash futhi ngenxa yalokho zisekelwe kuphela credit.
The US bafuna ukuphoqelela futhi cishe impela ukuthi credit global ephethwe EDF.
Ngakho umhlaba uyoba njengomfundisi ubugqila kanye Fed lizobamba General Credit planethi, US kuyoba ngokusemthethweni amakhosi kwezwe.
Ukuze inhlangano ye World Ezombusazwe:
Sizokwenza kakhulu batshengise ukuba division geopolitical zomhlaba ngokwakha amandla super enkulu:
« NORTH AMERICA – ERUSSIA – CHINA – INDIA – AFRIKA – Europe – AUSTRALIA – ININGIZIMU MELIKA – JAPAN – KOREA »
Njengoba ungase ubone East akuyona hlu ngoba kubonakala ukuthi konke endaweni ukuhlanganisa Eastern Europe; lapho amagagasi kwababaleki iza kwaqondana axazulule futhi siphephele esikhundleni sokuya axazulule noma aphephele Saudi Arabia eGibhithe noma kwamanye amazwe Muslim kanye high density.
Musa ukucabanga kwaba khona ngengozi beza sizakhele siphephele eYurophu kusukela ngo-1948!
Lokho kusobala towards lokho Ngicabanga senza elikhulu intuthuko.
The isiphukuphuku enkulu kulezi ezizathwini ngeke Yebo ubuKristu outvoted eYurophu.
« Iwumthombo the Faith Christian
Islamic babe! «
ISonto LamaKatolika ubonakala awusona zinyamalale futhi ngicabanga lokhu kungase kwenzeke esikhathini esingaphansi isizukulwane!
Sibona ukuthi uSathane sezombusazwe futhi uma uJesu Kristu ingafiki, ayitholayo ukholo ukubuya kwakhe. (Luka 18: 7,8).
Lokhu Nodadewabo kuJesu Kristu yami ethandekayo, kubonakala sengathi ikusasa ibandla lethu futhi lobuKristu yethu yesikhathi esizayo ngamasheduli izibikezelo geopolitical strategist omkhulu futhi osopolitiki planethi.
Yini futhi yini okufanele sikwenze!
Singasho esebenzisa izindlela zomthetho ukuphikisa izinqumo ezathathwa lezi okusezingeni global inqubomgomo abenzi ekusizeni ukukhetha amaqembu ezombusazwe okwenza ekulweni wezifiki Uhlelo lokhetho.
Kodwa thina ngeke athwale umthwalo imiphumela …! (Violence and Zombango!)
Singabonisa futhi funa kodwa ngokuqinisekile sizokwenza hamba for the ababi.
Ngakho masikhumbule ukuthi uJesu Kristu uye wacela ukuba sibe nokholo kuye, ukusiza, ukuthanda umakhelwane wethu kanye mphendulele nesinye isihlathi uma hits us.
Ngakho ithemba lethu kuphela itholakala nokholo eNkosini yethu futhi iNkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu othembisa uze ukusisindisa ukuba ekupheleni kwesikhathi.
UJesu Kristu uye wathembisa ukuza bese ugcine nathi ekupheleni kwesikhathi bese siyaqiniseka ukuthi uyosigcina isithembiso sakhe ngokushesha. It is a ngokuqiniseka.
Gcina nokholo ezwini lakhe, ngoba izwi lakhe liyiqiniso.
UJESU KRISTU uyiNkosi yami
Sonke kudingeka sithandaze ngobuqotho ukubuya kwakhe ngokushesha ngoba siyabona ukuthi izikhathi kuphele zenziwa kakade.
Ngiyazi ukuthi abaningi Abafowethu nodadewethu udumazeke ngoba nokuthumba ingenziwanga ngenyanga ka September 2015.
Kodwa nokubuya kweNkosi sekusondele futhi kungase kwenzeke futhi mhlawumbe lo nyaka, 2015.
Izimpawu amaningi avumela ukuba bakubheka, kodwa uNkulunkulu nguye ukunquma usuku kanye nesikhathi ukubuya kukaJesu Kristu.
Yini kubalulekile ngamunye kithi ukuba sithandaze futhi ucele usizo kuNkulunkulu ukuze ukwazi ukuwela lethunzi ukuthi yahlasela umhlaba nokuthi zenza ukukhanya kokholo eziningi zabafowethu nodadewethu.
Ake ilangabi ukholo lwethu kuvutha aphephe ukonakala waleli zwe funa uya off in the mists isikhathi kahle.
UJesu Kristu emnyango wethu. Kodwa uNkulunkulu kuphela enquma uma noma lapho uyakulimaza. Ngakho qaphela ngihlala othandweni uJesu Kristu futhi kuhambisana nemithetho kaNkulunkulu.
Ake us jabula, ngoba zonke izibonakaliso iziprofetho ukumemezela kwansuku kakhulu uzosheshe abuye uJesu Kristu.
Gcina ukholo ngokuqiniseka ukubuya kwakhe speedy.
Ilindele ukubuya kukaJesu Kristu bathandaze futhi usize labo bani uNkulunkulu uthumela us.
Ake us qiniseka ukuthi uNkulunkulu uyasithanda nokuthi wakhe oNgcwele kuyosisiza nsuku zonke kuze kubuye uJesu Kristu.
Khumbula ukuthi ukuze uthole usizo lukaNkulunkulu kumelwe sibuze lapha ngomthandazo ngobuqotho nokuqiniseka nini siludinga.
UNkulunkulu wasinika inkululeko yokuzikhethela futhi ngenxa yalokho ngeke angenele ezimpilweni zethu uma singazi ukumbuza.
I bakumema ukuba ucele uNkulunkulu ukuba aqondise ukuphila kwakho kwansuku zonke ukuze uhlale on track.
Lokhu akusona isikhathi luntengantenge, uJesu Kristu ukanye nathi ngokushesha futhi ebuya ekuphileni kwetfu uyoshintshwa.
Ukuze wazi lokho okuyokwenzeka ngemva kokubuya kukaJesu Kristu, I bakumema ukuba ufunde isihloko yami:
Ukujabulisa Brothers nodadewabo abathandekayo kuKristu ukuxhumana ekhelini le-blog koxhumana nabo.
Ake sonke, kaKristu futhi ukusebenza ekusakazeni izwi elihle « UJesu Kristu uyeza emuva ngokushesha »
Uthando nokuthula ngoJesu Kristu ube phezu nonke.